Iqonga lezeMeko eziSebenzayo kunye neHybrid yoKhula | Ukukhawulezisa
Isakhelo sokuKhawulezisa ukukhula
Itikiti kunye noBhaliso
Inqanaba eliphambili kunye nokuqhekeka
Ukusasazwa ngokuBukhoma ngokuHlanganisiweyo
Ababonisi kunye nabaxhasi
Ngema Zama mahhala Bhukisha idemo
Zama mahhala Bhukisha idemo
Iqonga leminyhadala kunye ne-hybrid kuqhuba ukukhula.
Ukukhawulezisa liqonga leziganeko zonke ezikwenza ukuba ukwazi ukwandisa ukufikelela kwakho, ukubandakanya abaphulaphuli bakho, ukudala uluntu oluhlala luhlaza, kunye nokuqhuba ukukhula okuzinzileyo kombutho.
# 1 Iqonga leziganeko ze Ukukhawulezisa ukukhula
Wonke umsitho uza neseti yawo eyahlukileyo yemiceli mngeni kunye neenjongo. Siyile ngokukodwa iqonga lethu lokunceda amaqela emisitho ukuba akhawulezise iinjongo zawo zokukhula ngelixa kuncitshiswa ubunzima obunxulunyaniswa netekhnoloji yomsitho. Yandisa ukufikelela kwakho, ukubandakanya abo bakhoyo, ukuvelisa izikhokelo ezifanelekileyo, ukwenza abaxhasi bakho bonwabe, kunye nokunyusa ingeniso yakho ngokukhawuleza.
Jonga iNkqubo-sikhokelo yokuKhawulezisa ukukhula
IHolo yoMboniso kunye nabaxhasi
Hlola oku amava
Yongeza ubuchule kunye nobungcali kwiqonga elingenamida.
Yila imeko-bume yomsitho wedijithali emileyo nophawu lwakho ngaphandle kwekhowudi.
Thengisa amatikiti, ubhalise abantu abazimaseyo, kunye necandelo labaphulaphuli bakho ngaphakathi kwemizuzu.
Iqela kunye ne1: 1 Inethiwekhi
Khuthaza uluvo loluntu kuwo wonke umsitho ukwenza unxibelelwano oluhlala ixesha elide.
Yandisa ingeniso yakho ngokuhambisa ixabiso elomeleziweyo kunye nelilinganisekayo kwimiboniso nakwabaxhasi.
Khuthaza abo bakhoyo ukuba benze izinto ezithile eziza kubavuza ngokuzibandakanya kwabo.
Idatha yeXesha leNene
Ngokukhawuleza fikelela kwidatha yomsitho wamva nje ukuze uqonde ngcono ukusebenza kwakho.
Amava elebheli emhlophe
Qalisa imeko yomcimbi ophawulwe ngokupheleleyo ngokungathi yitekhnoloji yakho.
Ukubamba umsitho ukhuselekile, kwaye uhambelana nemigangatho yamanye amazwe.
Yakha amandla ngokudibanisa isitaki sakho setekhnoloji kwaye ulawule yonke ifanele.
umthengi inkxaso ikwiDNA yethu
24/7 Inkxaso yokwenene evela kuBantu abaNene
Iqela lethu elizinikeleyo lenkxaso lihlala linomqolo wakho, nokuba ungakanani na ixesha okanye ixesha (akukho bots apha!).
Isiseko soLwazi esineenkcukacha kunye nee-FAQ
Fikelela kwingqokelela yamaxwebhu emveliso ukuxhasa uphuhliso lomsitho wakho onke amanyathelo endlela.
Ulwazi lweMizi-mveliso, Izixhobo eziluncedo kunye noHlaziyo lweMveliso
Funda ngendlela yokwenza iminyhadala engaqhelekanga ebandakanya abaphulaphuli bakho kunye nokufumana iziphumo ezinokulinganiswa.
phezu 12,500 iinkampani kunye nemibutho bayathembela ukukhawulezisa ngeziganeko zabo.
Abathengi bethu bathethile…
Iphakheji epheleleyo ekulula ukuyisebenzisa nokuseta. Ukuphuculwa rhoqo. Inkxaso yayintle!
Ulawulo loMbutho ongajonganga kwenza nzuzo
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyifunda, inkonzo ebalaseleyo yabathengi, abasebenzi abanolwazi kakhulu abaphendule yonke imibuzo yam ngokukhawuleza, kunye nexabiso elikhulu.
Umanyano lobunzima beBrain kuMantla eKentucky
Iimpawu zeqonga kulula ukuseta, ukuyila ngefomathi, kwaye ivumela ukusetyenziswa ngokulula ngabantu abakhoyo.
Iimpawu zoMsitho we-Expo zazilungile kwinkomfa yeprojekthi yomfundi. Inkxaso ibibalasele ngaphambili nangaphakathi komsitho.
IBhunga loPhuhliso lwezoQoqosho eTexas
Iimpawu zokukhawulezisa zinomdla kwaye kulula ukuzisebenzisa. Inkonzo yabathengi iyamangalisa kwaye yenza amava angcono kakhulu!
Umbutho waseTexas weeBhodi zeSikolo
Impendulo yenkxaso ekhawulezileyo intle! Kwakhona, siyayithanda indlela iqonga elinokulungelelanisa ngayo. Ukuhlaziywa okuqhubekayo kukhulu kakhulu kuba siziva sisiva ekunikezeleni ingxelo.
Fumana yakho funda on
Funda ulwazi lwethu lwamva nje ngeziganeko, itekhnoloji, ukukhula komsebenzi kunye nokunye.
Iingcebiso zohlahlo-lwabiwo mali lomsitho Wonke uMcwangcisi weSiganeko kufuneka azi
Izizathu ezili-16 zokuba kutheni kufuneka ukhethe iplatifomu yomnyhadala
Konke Odinga Ukukwazi Ngendlela Yokwenza Ingqungquthela Ephumeleleyo Kwi-Intanethi
Izizathu ezi-7 zokuba kutheni imisitho ebonakalayo sisixhobo esibalulekileyo sentengiso
Iimpawu zaMva nje oziFunayo kwiQonga lokuCwangciswa kweNdibano kwi-Intanethi
Izinto ezi-5 eziPhezulu ekufuneka uziqwalasele ukugcina uMsitho wakho weHyididi ukhuselekile
Iindlela ezi-6 eziGqwesileyo zokuThengisa uMnyhadala wokuNyusa amava akho eMisitho yeHybrid
Izinto ezi-6 eziPhezulu zokuThathelwa ingqalelo xa kubanjwa iNkomfa ezinzileyo okanye yeHybrid
Yintoni omele uyiqwalasele xa ukhetha indawo yeHybrid
Ululawula njani ulindelo lwabazimasi malunga nemisitho ebonakalayo
Iindlela ezili-12 zokwakha iRhafu ngeSiganeko esiHlanganisiweyo
Ukubuyiselwa kweNkokeli kwimisitho ebonakalayo kunye neHybrid
iziganeko ziyavela. Ungaze uphuthe ukubetha.
Bhalisela iincwadana zethu ukufumana iindaba zethu zamva nje, izicwangciso, amaqhinga, izimvo, uhlaziyo lwemveliso kunye nokunye.
Iiblogi kunye nokuqonda
Ilungelo lokushicilela 2021 Ukukhawulezisa
umthetho wabucala Imigaqo yokuSebenzisa